နံနံပင်က ကျောက်ကပ်ရောဂါ အတွက် အထူးပင် ကောင်းမွန်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်နေရင်လည်း
ကုသပေးနိုင် ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျောက်ကပ်ရောဂါ ဖြစ်နေသူတွေ အတွက် နည်းလမ်းကောင်းလေးမို့
နံနံပင် ၁၅ ပင်လောက်ကို သန့်ရှင်းစွာ ဆေးကြောလိုက်ပါ။ ထို့နောက် ဖန်ခွက် တစ်ခွက်စာ ရေနွေးကြိုပါ။
ထိုကြိုထားတဲ့ ရေနွေးအိုထဲကို နံနံပင်ကို နုတ်နုတ်စင်းပြီး ထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးနောက် အရွက်များကိုဖယ်ကာ
အရည်များကို အအေးခံပြီး သောက်သုံးပေးပါ။ ကျောက်ကပ်ရောဂါကို ကာကွယ်လိုသူတွေ အနေနဲ့
တစ်ပတ်မှ တစ်ကြိမ်လောက် မှီဝဲပေးပါ။ ကျောက်ကပ်ရောဂါ ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ နေ့တိုင်း
မသန်စွမ်း ကျောင်းသားများ တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုနေမှုအား ကယားပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ကြည့်ရှု အားပေး
မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုကြရာ ကယား ပြည်နယ်တွင် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ စာစစ်ဌာန အနေဖြင့် လွိုင်ကော်မြို့တွင် ငါးခု၊ ဒီးမော့ဆိုမြို့တွင် နှစ်ခု၊ ဖရူဆိုမြို့တွင် တစ်ခု၊ ဘော်လခဲမြို့တွင် တစ်ခု၊ ဖားဆောင်းမြို့တွင် တစ်ခု စုစုပေါင်း ၁ဝ ခု၌ ဖြေဆိုသူ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ စုစုပေါင်း ၃၉၈၁ ဦး ရှိကြောင်း သိရသည်။ ကယားပြည်နယ်တွင် ကျင်းပလျက် ရှိသော တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ၌ မသန်စွမ်း ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ အမျိုးသား တစ်ဦး၊ အမျိုးသမီး သုံးဦး စုစုပေါင်း လေးဦး ဝင်ရောက် ဖြေဆိုရာ ၎င်းတို့အနက် လက်နှစ်ဖက်မပါ၊ ခြေတစ်ဖက်သာ ပါရှိသူ မနော်ဒါးခူမှာ ၎င်း၏ ခြေတစ်ဖက်ဖြင့် ကောင်းမွန်စွာ ဖြေဆိုနေသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ အဆိုပါ ကယားပြည်နယ် မသန်စွမ်း ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ ဝင်ရောက်ဖြေဆို နေမှုကို ကယားပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်ဦး ခင်မောင်ဦးနှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများက ယမန်နေ့ နံနက် ၉ နာရီက လွိုင်ကော်မြို့ရှိ စာစစ်ဌာနများသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှု အားပေးခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
ကျွန်တော်က သားသတ်သမား..။ လုပ်တာက သားသတ်တဲ့အလုပ်..။ ငယ်စဉ်ကတည်းက အကောင်ငယ်လေးတွေကို သတ်ရာမှာ ကျွန်တော် ၀ါသနာထုံခဲ့သည်။ အကောင်ငယ်လေးတွေ သွေးသံရဲရဲ နှင့် မြင်ရလျှင် ကျွန်တော့်မှာ ပျော်လို့မဆုံး..။ မိဘနှစ်ပါး ငယ်စဉ်ကတည်းက ဆုံးပါးသွား တာကြောင့် ကိုယ့်ဝမ်းစာအတွက် ဒီသားသတ်ရုံမှာ အလုပ်လုပ်လာခဲ့တာ အခုဆိုရင် ဒီမြို့ထဲမှာ သားသတ်မယ် ဆိုရင် ကျွန်တော် မပါလျှင် မပြီးသလောက်..။ ဒီ့အတွက် ကျွန်တော် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂုဏ်ယူမိသည်။ ကျွန်တော် လုပ်ချင်တာနဲ့ လုပ်နေရတာနဲ့ ဆန္ဒနဲ့လက်တွေ့ တစ်ထပ်တည်းချသည်ဟု ကျွန်တော်ထင်မိသည်။
နွားတွေ..၊ ၀က်တွေ သတ်ရတာ ကျွန်တော့် အတွက်တော့ သာမာန်အလုပ်သာ ဖြစ်သည့်အတွက် ဘာခံစားမှုမှ မရှိ..။ သူတို့တွေက ကိုယ်ချွတ်ပေးမှ ဒီဘ၀က ကျွတ်ကြရတာလေ..။ ဒီ့အတွက် သူတို့တွေ ကျွန်တော့်ကို တောင် ကျေးဇူးတင်သင့်သေးသည်။
၀က်တစ်ကောင်ကို သတ်ပြီး ရောင်းချဖို့အတွက် တပည့်တွေကို ခေါ်ပြီး အတွဲခိုင်းလိုက်သည်။ ဒီနေ့တော့ ၀က် ၂ကောင်နှင့် နွားတစ်ကောင် ပေါ်ဖို့ရှိသည်။ အခုထိ ၀က်နှစ်ကောင် ပေါ်လို့ ပြီးသွားပြီ..။ နွားတစ်ကောင် ပေါ်ဖို့သာ ကျန်တော့်သည်။ နွားတစ်ကောင် ပေါ်ရတာ မခက်..။ ကြိုးတုတ်ပြီး လည်ပင်းမှာ ရှိတဲ့ သွေးကြောလှီးချ လိုက်ရင် ပြီးပီ..။ ၀က်တွေက တစ်ခါတစ်လေ အရမ်းအော်လွန်းသည်။ ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ နှလုံးကို ဓါးနဲ့ထိုးရတာ နည်းနည်းခက်သည်။ နှလုံးနေရာတွေက ၀က်တစ်ကောင်နဲ့ တစ်ကောင် မတူ..။ ဒါမျိုးက လုပ်သက်ရှိမှသာ သိပြီး တစ်ချက်တည်းနဲ့ ကိစ္စပြီးနိုင်သည်။
ကျန်တဲ့နွားတစ်ကောင်ကိုပေါ်ဖို့ တပည့်တွေကို လှမ်းသတိပေးလိုက်သည်။ ကျန်တဲ့ တစ်ကောင်ကို မြန်မြန် ပေါ်ပြီး အိမ်မှာ ကိုယ်ဝန် နေ့စေ့လစေ့ နှင့် ဇနီးသည်ထံ အမြန်ပြန်ရအုံးမည်။ သားဦးမို့ အတွေ့အကြုံမရှိပဲ ကြောက်နေရှာသော ဇနီးသည်နားမှာ ပြန်ပြီး အချိန်ပေးပြီး အားပေးနေဖို့လိုသည်လေ..။
"ဆရာ.. အခုပေါ်မယ့် အကောင်က ဇီးကြီးနဲ့…"
"ဒါပေမယ့်… ဒီကောင်မက နက်ဖန် သဘက်ခါလောက်ဆို မွေးတောင် မွေးတော့မှာ ဆရာ.."
စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ ထွက်သွားသော တပည့်ကို ကြည့်ရင်း စိတ်တိုမိသည်။ အလိုလိုနေရင်း သနားဖို့လောက် စဉ်းစားနေတဲ့ကောင်..။ တိုးတက်မယ့်ကောင်မဟုတ်ဘူး..။ စီးပွားရေး လုပ်ရတာ ကတိက အရေးကြီးသည်။ ကတိပျက်ရင် နောင် ဘယ်ဖောက်သည်မှ ရမည် မဟုတ်..။
ကျွန်တော် နွားမကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်သည်။ သူမမျက်ဝန်းမှာ မျက်ရည်တွေ ရှိနေသည်။ သူ့မျက်ဝန်းတွေက ကျွန်တော့်ကို အသနားခံတဲ့ အကြည့်..။ ခဏလေး နေဖို့ အချိန်ပေးပါအုံးဆိုတဲ့ အကြည့်…။ အို… သေခါနီး နွားတိုင်း မျက်ရည်ကျနေတာပဲလေ.. အထူးအဆန်းမှ မဟုတ်တာ..
ကျွန်တော် လုပ်နေကျအတိုင်း သူ့လှည်ပင်းက သွေးကြောတွေပေါ် ကျွန်တော့် ဓါးသွားနဲ့ ခုတ်ဖြတ်လိုက်သည်။ တပွက်ပွက်ထွက်လာသောသွေး.. တစ်ဆန့်ဆန့် ဖြစ်နေသော ခေါင်း.. ရုန်းကန်နေသော ခြေလက်များ.. မြင်နေကျ မြင်ကွင်းဖြစ်သည့်အတွက် ကျွန်တော့် အတွက်တော့ အထူးအဆန်းမဟုတ်…။ ထိုအချိန်မှာပင်…. ထူးဆန်းတာ တစ်ခုက ဖြစ်လာသည်။
တစ်ဆန့်ဆန့် အသက်ငင်နေသော နွားမမှ ကလေးမွေးတာ ကျွန်တော့်ဘ၀တွင် ပထမဆုံး မြင်တွေ့ဖူးချင်းဖြစ် သည့် အတွက် အံ့သြထူးဆန်းစွာပင် ကြည့်နေမိသည်။ မွေးဖွားလာသော နွားပေါက်လေးမှာ ကံကောင်းထောက်မ စွာ အသက်ရှိသေးသည်။ နွားပေါက်လေး မွေးဖွားပြီးသည်နှင့် လှုပ်ရှား ရုန်းကန်နေသော နွားမကြီး ခန္ဒာကိုယ် တစ်ခုလုံး ငြိမ်ကျသွားသည်။
မြင်လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းက ရင်နင့်စရာကောင်းလှသလို ဒီမြင်ကွင်းကိုလည်း ကျွန်တော့် စိတ်ထဲကနေ ဘယ်တော့မှ မေ့ပျောက်နိုင်တော့မည်မဟုတ်..။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် ကျွန်တော့် လက်နဲ့ ပေါ်ခဲ့တဲ့ အသက်မရှိတော့တဲ့ နွားမကြီးရဲ့ နွားကို အားရပါးရ စို့နေရှာသော နွားပေါက်လေး…။
ကျွန်တော် မြင်နေတဲ့မြင်ကွင်းသည်ချက်ချင်းပင် ပြောင်းလဲသွားသည်။ သေဆုံးနေတဲ့ နွားမကြီးနဲ့
နွားပေါက်လေးနေရာမှာ ကျွန်တော့် ဇနီးသည်နဲ့ မွေးဖွားလာမည့် ကလေးငယ်လေးကို မြင်ယောင်မိသည်။ အသက်မရှိတော့တဲ့ မိခင်ရဲ့ နို့ရည်သောက်သုံးနေတဲ့ ကလေးငယ်လေး….
"ငါ…ငါ…. မလုပ်သင့်တာကို လုပ်လိုက်မိပြီ…"
သူများအလှည့်တုန်းက မစဉ်းပဲ လုပ်ခဲ့ပြီး ကိုယ့်အလှည့်ကျတော့ ဘယ်လိုခံစားရမလဲ ကျွန်တော် မတွေးကြည့်ရဲတော့..။ ကျွန်တော် ချက်ချင်းပဲ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်သည်။ ငါ..ငါ…. ဒီသားသတ် အလုပ်ကို တစ်သက်လုံး စွန့်လွှတ်လိုက်ပြီး အခုချိန်ကစပြီး တစ်ခြား အလုပ်နဲ့ ငါအသက်မွေးတော့မယ်..။ ငါ တစ်သက်လုံး ဘယ်သူ့ အသက်မှ မသတ်တော့ဘူး..။
ဆုံးဖြတ်ပြီးသည်နှင့် ချက်ချင်း အိမ်ကို ကျွန်တော် အမြန်ပြန်ပြေးသည်။ လမ်းတစ်လျှောက်လုံး ကျွန်တော့် ပါးစပ်ကနေ တောက်လျှောက် ရွတ်နေမိသည်က..
တရားရုံးညွှန်ကြားချက်ကို မလိုက်နာသဖြင့် Chris Brown ထောင်ကျ
နာမည်ကျော် အဆိုတော် ခရစ်ဘရောင်း တစ်ယောက် တရားရုံးရဲ့ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း မနေထိုင်တဲ့အတွက် ထောင်ဒဏ် ချမှတ်ခြင်း ခံခဲ့ရတယ်လို့ contactmusic.com မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အခုလို ထောင်ဒဏ်ချမှတ် မခံရမီက ခရစ်ဘရောင်းဟာ ကိုယ်ထိလက်ရောက် စော်ကားမှုနဲ့ ပြန်လည် ပြုပြင်ရေး စင်တာမှာ လေးလကြာ နေထိုင်ဖို့အတွက် တရားရုံးရဲ့ ညွှန်ကြားခြင်းကို ခံထားရပါတယ်။
အဲဒီလို ပြန်လည် ပြုပြင်ရေးစင်တာမှာ နေထိုင်နေစဉ်အတွင်းမှာ ခရစ်ဘရောင်းဟာ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် နေထိုင်ခြင်းမရှိဘဲ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို ချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့အတွက် တရားရုံးက သူ့ကို ထောင်ဒဏ် ချမှတ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် ခရစ်ဘရောင်းဟာ ပြုပြင်ရေး စင်တာမှာ နေရမယ့် လေးလတာကို ယခုအခါမှာတော့ ထောင်ထဲမှာ ကုန်ဆုံးရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခရစ်ဘရောင်းဟာ သူ့ရဲ့ချစ်သူဟောင်းဖြစ်တဲ့ ရီဟားနားကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် ရိုက်နှက်ခဲ့ခြင်း အပါအဝင် ဒေါသအလျောက် သူတစ်ပါးကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် စော်ကားတဲ့ အပြုအမူတွေ ပြုလုပ်လေ့ ရှိတဲ့အတွက် ပြန်လည် ပြုပြင်ရေးစင်တာမှာ ကုသမှုခံယူဖို့ မကြာခဏ ညွှန်ကြားခံရလေ့ရှိသူ ဖြစ်ပါတယ်။
ငွေစာရင်းကိစ္စ မုံရွာတက္ကသိုလ် ဝန်ထမ်းများ ရန်ပွဲဖြစ်မှု ခုံအဖွဲ့ဖွဲ့၍ စစ်ဆေးမည်ဟုဆို
မုံရွာ၊ မဇ္ဈိမ။ ။ စစ်ကိုင်းတိုင်၊ မုံရွာမြို့၊ မုံရွာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းအတွင်း တက္ကသိုလ်၏ စီမံ/ဘဏ္ဍာဌာနရှိ ရုံးခန်းမတွင် ယခုလ ၁၂ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီခွဲအချိန်က ဌာနဆိုင်ရာ ငွေစာရင်းများ ရှင်းရာမှ ဝန်ထမ်းများ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကို တက္ကသိုလ်က ခုံရုံးဖွဲ့၍ စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုလိုက်သည်ဟု မုံရွာမြို့နယ်ရဲစခန်း တာဝန်ကျ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက မတ်လ ၁၅ ရက်တွင် ပြောသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ မုံရွာ တက္ကသိုလ် စီမံ/ ဘဏ္ဍာဌာနတွင် ရုံးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေကြသည့် စီမံ /ဘဏ္ဍာ ဌာနမှူး(ဌာနခွဲ မှူး)နှင့် လက်ထောက် ဌာနစုမှူး တို့သည် ဌာနဆိုင်ရာ ငွေစာရင်းများ ပြုစုကြရာမှ စကားများ၍ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု တက္ကသိုလ်မှ မျက်မြင်ဖြစ်သူ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ပြောပြသည်။
ထိုသို့ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်အတွက် ဌာနစုမှူးအမျိုးသမီးတွင် ဦးခေါင်းနောက်စေ့ ဘယ်ဖက်ခြမ်းနှင့် ပခုံးပြတ်ရှဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့ သည်ဟု ၎င်း ဆေးဝါးကုသမှု ခံယူနေသည့် ဆေးရုံမှ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ပြောသည်။
ဒဏ်ရာရရှိသူ၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေသည် ကောင်းမွန်လာပြီး အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ မရှိတော့ဟု အထက်ပါ ဝန်ထမ်းကဆိုသည်။
အဆိုပါ ဌာနတွင်း ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မုံရွာနယ်မြေရဲစခန်းမှူး ရဲအုပ် ကျော်လှိုင်မိုးနှင့် အဖွဲ့သည် မုံရွာ တက္ကသိုလ် သို့သွားရောက်ပြီး တာဝန်ခံ ပါမောက္ခချုပ်နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ရာ ဖြစ်ပွားမှုသည် သာမန်ရုံးတွင်း ပြဿနာ ဖြစ်သည့်အတွက် ထိုသူတို့ကို ခုံဖွဲ့၍ စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်က အရေးယူသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း တုန့်ပြန်ပြောကြားခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ဟားခါး မတ် ၁၆
ဟားခါးမြို့၊ ဈေးသစ်ရပ်ကွက်၌ မတ် ၁၆ ရက် ည ရ နာရီ ၄၅ မိနစ်ခန့်က မီးလောင်မှု တစ်ခုဖြစ်ပွားသည်။
မီးလောင်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့် ဟားခါးမြို့၊ ဈေးသစ်ရပ်ကွက် အိမ် အမှတ်(၂၅၆)၊ နှစ်ထပ်သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ကာ၊ ပျဉ်ခင်းနှစ်ထပ်အိမ်တစ်လုံးဆုံးရှုံးပြီး တန်ဖိုးကျပ် တစ်သိန်းခန့် ဆုံးရှုံးကြောင်း ပြည်နယ် မီးသတ် ဦးစီးမှူး ၏ ပြောကြား ချက်အရ သိရသည်။
အဆိုပါ မီးလောင်ရာသို့ သန္ဓေမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၄ ဦး၊ အရန်မီးသတ် တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၅ ဦးနှင့် ပြည်သူ ၃၀ ဦးကျော်က မီးသတ်ကားနှစ်စီးဖြင့် ၀ိုင်းဝန်းငြိမ်း သတ်ရာ အခြားလူနေအိမ်များသို့ ကူးစက်ခြင်း မရှိဘဲ ည ၈ နာရီ ခန့်တွင် မီးညွန့်ကျိုးငြိမ်းသတ်နိုင်ခဲ့သည်။ မီးလောင်မှုကြောင့် လူ၊ တိရစ္ဆာန် ထိခိုက်သေဆုံးခြင်း မရှိကြောင်းနှင့် မီးလောင်မှုဖြစ်စဉ်အား သက်ဆိုင် ရာက စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘွဲတံဆိပ်တော်ရဆရာတော်များအားလှူဒါန်း (ဓာတ်ပုံများ)
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ.ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်နေပြည်တော်ဥပ္ပါတသန္တိစေတီတော်ပရိဝုဏ်ရှိသာသနာ.မဟာဗိမာန်တော်ကြီး တွင်ကျင်းပသည်.သာသနာတော်ဆိုင်ရာ ဘွဲတံဆိပ်တော်များ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပူဇော်ပွဲနှင်. ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူပွဲသို.တက်ရောက်ပြီးန၀ကမ္မအလှူငွေ နှင့်လှူဖွယ်ပစ္စည်းများလှူဒါန်းကုသိုလ်ပြု(်၁၅.၃.၂၀၁၄)
မြန်မာအမျိုးသမီး ထောင်နဲ့ချီပါဝင်တဲ့ အမျိုးသမီးလမ်းလျှောက်ပွဲကို ရန်ကုန်မြို့မှာ ပထမဆုံး အကြိမ် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာအမျိုးသမီးများ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်စေဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး အခုလို စုပေါင်းလမ်းလျှောက်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်တယ်လို့ လမ်းလျှောက်ပွဲကို သွားရောက် သတင်းရယူခဲ့တဲ့ ဒီဗွီဘီသတင်းထောက် လေးလေးမွန်က ပြောပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်း မြို့နယ်ပေါင်းစုံက အမျိုးသမီး အရွယ်စုံ စုပေါင်းလမ်းလျှောက်ပွဲကို ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ အင်းယားကန်ဘောင်၊ တံတားဖြူက စတင်ပြီး ပြည်သူ့ရင်ပြင်မှာ ပန်းဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။
တရုတ် နိုင်ငံ၊ ချောင်းတွင်းမြို့မှာ ရှိတဲ့ အသက် (၆၈) နှစ် အရွယ် လယ်သမား အဘိုး အို တစ်ဦး ဟာ ၀က်တစ်ကောင် ကို စီးနင်းပြီး မြို့ အနှံ့ လျှောက် သွား ခဲ့ပါတယ်။ အလေးချိန် ကီလို (၂၅၀) ခန့်ရှိပြီး သုံးပေ လောက် မြင့် တဲ့ ၀က်တစ်ကောင် ကို လူက စီးနင်း နေတဲ့ မြင် ကွင်း ဟာ အံ့အား သင့်စရာ ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်။ ဒီ လယ်သမားအဘိုးအိုဟာ ၀က်တွေနဲ့ နှစ်ပေါင်း (၃၀)နီးပါး ရင်းနှီးစွာ နေထိုင် လာခဲ့ တာမို့ ၀က်တွေရဲ့ စရိုက် လက္ခဏာကို ကောင်းစွာ သိရှိထားပါတယ်။ လည်ချောင်းနာဝေဒနာ ခံစားရပြီးတဲ့နောက် လယ်သမား အဘိုးအို ဟာ လမ်းကောင်းစွာ လျှောက်နိုင်ခြင်း မရှိတာမို့ ၀က်တွေကို အားပြုပြီး သွားလာ နေရတာ ဖြစ် ပါတယ်။ ၀က် တစ် ကောင်ကို စီးနင်းဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လယ်သမား အဘိုး အို ဟာ တုတ်တစ်ချောင်း (သို့မ ဟုတ်) အစာ တစ်စုံကို ကိုင်ကာ ၀က်တွေကို ထိန်းကြောင်း ပြီး သွားလာခဲ့ပါတယ်။ မိုးရွာတဲ့ အချိန်မှာ လည်း ထီးဆောင်းပြီး သွားလာလေ့ရှိပါတယ်။ လယ်သမားအဘိုးအိုကို မြို့ရဲ့ နေရာ အနှံ အပြား မှာ ၀က်စီးပြီး သွား လာ နေတာကို အမြဲတမ်း တွေ့မြင်ရတယ်လို့ မြို့ခံတွေကဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံဟာ ၀က်သားစားသုံးမှု အများဆုံး ဒေသအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရပြီး ကမ္ဘာ့ ဒေသ အနှံ့က ၀က်တွေရဲ့ထက်ဝက်ခန့်ကို စားသုံးလေ့ ရှိပါ တယ်။ အမေရိကန်အခြေစိုက် ၀က်သား ရောင်းချတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာ တရုတ်နိုင်ငံကို ၀က်သား တင်ပို့ မှု ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ပေါင် (၄ ဒသမ ၂) ဘီလီယံဝင်ငွေ ရရှိခဲ့တယ် လို့ သိရပါတယ်။ ၀က်တစ်ကောင်ရဲ့ ဈေး နှုန်း ဟာ မော်တော်ကားထက်နည်းနေတဲ့အပြင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှုကိုလည်း အထောက် အကူဖြစ် စေ တာမို့ ၀က်ကို စီးတော်ယာဉ်အ ဖြစ် အသုံးချခဲ့တဲ့ လယ်သမားအဘိုးအိုရဲ့လုပ် ရပ်က ချီးကျူးစရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင် မျောက်ဝံ တစ်ကောင် ကို လူသားတစ်ဦးလို မွေးဖွားပေးခဲ့
အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ဆန်ဒီယေဂို မှာရှိတဲ့ တိရိစ္ဆာန်ရုံ တစ်ခုမှာ ကိုယ်ဝန် ဆောင် မျောက်ဝံ တစ်ကောက် ဟာ ကလေး မွေးဖွားဖို့ အခက် အခဲရှိ နေတာမို့ လူသား တစ်ဦးလို မွေးဖွား ပေး ခဲ့တယ် လို့ သိရပါတယ်။ အ သက် (၁၈)နှစ် အရွယ်ရှိ လာမာနီ အမည်ရ မျောက်ဝံမကြီး ဟာ မွေးဖွားရာ မှာ အခက် အခဲရှိခဲ့လို့ အရေး ပေါ် ခွဲစိတ်ကုသမှုတွေ ပေးနိုင် ဖို့ သားဖွား မီး ယပ် ဆရာဝန်တွေရဲ့ အကူ အညီကို ရယူ ခဲ့ပါ တယ်။ လာမာနီ ကို တိရိစ္ဆာန် တွေ ကုသပေး တဲ့ ဆေးရုံမှာ မွေးဖွားခဲ့တာ ဖြစ်ပေမယ့် အသက် အန္တရာယ်မဖြစ်စေဖို့ တတ်ကျွမ်းတဲ့ ဆရာဝန် တွေကို အကူအညီ တောင်းခဲ့ရပါတယ်။ လာ မာနီရဲ့ ကလေးငယ်ဟာ (၄ ဒသမ ၆)ပေါင် ရှိပြီး နှစ်ဦး စလုံး အခြေအနေကောင်းတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မျောက်ဝံတွေဟာ လူသားတွေ လို ကိုယ်ဝန် ဆောင်ပြီး (၈ ဒ သမ ၃)လကနေ ကိုးလအကြားမှာ မွေးဖွားလေ့ရှိပါတယ်။ လာ မာနီရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် ဟာ ပေါင် (၂၀၀) ကျော်ရှိတာမို့ မွေးဖွားရာမှာ အခက်အခဲ သိပ် မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မွေးဖွားတဲ့အခါ အန္တရာယ် မဖြစ်စေဖို့ ဆန်ဒီ ယေဂိုမြို့ ဆေးရုံးက ဆရာဝန် တွေကို အကူအညီတောင်းခံရခြင်း ဖြစ်ပါ တယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာ လာမာနီနဲ့ ကလေး ငယ်ကို အထူးကြပ်မတ်ဆောင်မှာ ထားရှိ ထားပါတယ်။
အမေရိကန် နှင့် ရုရှား ကရိုင်းမီးယား အရေး ဆွေးနွေး မှုများ မအောင်မြင်
အမေရိကန် နှင့် ရုရှား တို့သည် ကရိုင်း မီးယား အရေး နှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေး မှုများ ကို သောကြာ နေ့ က ပြုလုပ် ခဲ့ရာ ကွဲပြား ခြားနား ချက်များ ကို မညှိနှိုင်း နိုင်ဘဲ ပျက်ခဲ့ ရကြောင်း သိရသည်။
တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ကရိုင်းမီးယားဒေသ၌ ရုရှားနှင့် ပေါင်း စည်းရေး အတွက် ပြည်သူ့ ဆန္ဒခံယူပွဲပြု လုပ် ရန် ရှိနေစဉ် ကန်နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီး ဂျွန်ကယ်ရီနှင့် ရုရှား နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီး လက်ဗ်ရော့ တို့သည် လန်ဒန် တွင် တွေ့ဆုံခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ သုံးနာရီခန့်ကြာ အောင် နှစ်နိုင်ငံ ၀န်ကြီး များဆွေးနွေး ခဲ့ကြ ပြီးနောက် ရုရှား ၀န်ကြီး လက်ဗ်ရော့က ရုရှား နှင့် အနောက်တိုင်းတို့သည် ယူကရိန်းအရေး နှင့် ပတ်သက် ၍ ဝေးကွာနေဆဲ ဖြစ် ကြောင်း ဆိုသည်။ ကျွန်တော် တို့မှာ အခြေ အနေ အပေါ်ကို ဘုံသဘော တူညီတဲ့ အမြင်မရှိခဲ့ပါ ဘူး။ ကွာခြား မှု တွေ ဆက်ရှိနေဆဲပါ”” ဟု ပြောခဲ့ သည်။ သို့သော် ၎င်း က ရုရှား သည် ရုရှား စကား ပြော သည့် လူဦးရေ နှစ် သန်း ခန့်နေထိုင်ရာက ရိုင်းမီးယား ဒေသ ကို ကျူးကျော် ရန် ရည်ရွယ်ချက်မရှိကြောင်းဆိုသည်။ သို့ သော် မော်စကို သည် ၎င်း ၏ ယာယီ ထိန်းချုပ် မှု အောက် တွင် ခရိုင်းမီးယား ပြဿနာ ကို ဖြေ ရှင်းချင်ကြောင်းကိုမူ လက်ဗရော့က အရိပ် အမြွက်ပြောသည်။
လူတိုင်း နားလည်ကြပါတယ်။ ဒါကို ကျွန်တော် တာဝန်ယူမှု အားလုံး နဲ့တွဲပြီး ပြော တာပါ ။ ခရိုင်းမီး ယား ဒေသဟာ ရုရှားအတွက် ပြင်သစ်အတွက် ကိုမိုရိုကျွန်းဆွယ်ကအရေး ကြီးသလို ၊ ဒါမှ မဟုတ် ဗြိတိန် အ တွက် ဖောက် ကလန်ကျွန်းက အရေးကြီး သလိုဖြစ်တာ တွေထက် အတိုင်းအဆအားဖြင့် ပိုပါတယ် ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ သမ္မတပူတင်က ကုလအထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းထံ အကြောင်း ကြားထားသည့် ကရိုင်းမီးယားပြည်သူ့ ဆန္ဒခံယူပွဲကိစ္စမှာ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေစံနှုန်းများနှင့် ကုလသမဂ္ဂ သဘောတူစာချုပ် တို့နှင့် ကိုက်ညီ ကြောင်း ဆိုသည့် ထုတ်ပြန်ချက်ကို ကယ်ရီ နှင့်လက်ဗရော့ဆွေးနွေးပွဲအပြီးတွင် ကရင် မလင်က ချက် ခြင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ကန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီ က ဆွေးနွေး ပွဲမအောင်မြင်ခဲ့သော်လည်း ၎င်း တို့ ဆွေးနွေးမှုသည် အလွန်တိုက်ရိုက်ကျကျ နှင့် ပွင့်လင်းစွာပြောခဲ့ကြောင်း ဆိုသည် ။ ထို့ ပြင် ၎င်း က အမေရိကန် နှင့် အနောက်နိုင်ငံများ ၏ ရပ်တည်ချက်ဖြစ်သော ဆန္ဒခံယူပွဲကို အသိ အမှတ်မပြု သည့် အချက် ကိုလည်း အ တည် ပြု ခဲ့သည်။ ၎င်း က ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် ရော နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းကပါ ဒီဆန်္ဒခံ ယူပွဲရလဒ်ကို အသိအမှတ်ပြုသွားမှာ မဟုတ် ပါဘူး။ ပိတ်ဆို့မှုတွေ ရှိလာပါလိမ့်မယ်။ တုံ့ ပြန်မှုတွေ ရှိလာပါလိမ့်မယ် ဟု ဆန္ဒ ခံယူပွဲ ဖြစ်ပြီးပါက နောက်ဆက်တွဲ အခြေအနေနှင့် တုံ့ပြန်နိုင်မှု များကိုလည်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
အယ်လ်ဂျာ ဇီးရား ရုပ်သံဌာန အား ပိတ်ပစ် ရန် ကာတာအား ဆော်ဒီ အာရေဗျ တောင်းဆို
ပင်လယ်ကွေ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး ကောင်စီ (GCC) အစည်း အဝေးပွဲ တွင် ဆော်ဒီ အာရေဗျ အစိုးရ က အယ်လ်ဂျာဇီးရား ရုပ်သံ ဌာန အား ပိတ်ပစ် ရန် ကာတာ အား တောင်းဆို ခဲ့သည်။ ပင်လယ် ကွေ့ ပူး ပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး ကောင်စီ အစည်း အဝေး ပွဲသို့ တက်ရောက် ခဲ့သူ တစ်ဦး နှင့် နီးစပ် သည့် သတင်းရင်း မြစ် တစ်ခု က ဆော်ဒီအာ ရေဗျ နိုင်ငံခြား ရေး ၀န်ကြီး ဆော့အယ် ဖိုင်ဆယ် က အယ်လ်ဂျာ ဇီရား ရုပ် သံဌာန ကို သာမက ဘရွတ် ကင်းစ်ဒို ဟာ စင်တာ နှင့် အာရပ် သုတေသန နှင့် မူဝါဒ လေ့လာ ရေး ဗဟို ဌာန တို့ကိုပါ ပိတ်သိမ်း ရန်တောင်း ဆို ခဲ့သည်ဟု သောကြာနေ့ က ပြောကြား ထား သည်။ မတ်လ ၅ ရက်နေ့ GCC အ စည်း အဝေး ပွဲတွင် တင်းမာမှု များ ဖြစ်ပွား အပြီးတွင် ဆော်ဒီ အာရေဗျ၊ ဘာရိန်း နှင့် ယူအေအီး နိုင်ငံ တို့ သည် ကာတာ မှ ၎င်း တို့၏ သံအမတ် များအား ပြန်လည် ခေါ်ယူ ခဲ့သည်။ ဆော်ဒီအား ရေဗျ၊ ဘာရိန်း နှင့် ယူအေ အီး တို့က ကာတာ သည် ၎င်း တို့ ပြည်တွင်း ရေးများ ကို ၀င်ရောက် စွက် ဖက်နေပြီး မူဆလင် ညီနောင် အ ဖွဲ့ ကို ထောက် ပံ့ နေသည် ဟု စွပ်စွဲ ထားကြသည်။ အထက်ပါ သတင်း ရင်းမြစ် က ဆော်ဒီ အာရေးဗျ နိုင်ငံခြား ရေး ၀န်ကြီး ၏ တောင်း ဆို မှု သည် ကာတာ နိုင်ငံ ၏ ပြည်တွင်းရေး အား ၀င်ရောက် စွက်ဖက် ခြင်း ဖြစ် ကြောင်း ပြန်လည် တုံ့ပြန် ထားသည် ဟု ဆိုထား သည်။ ကာတာ နိုင်ငံ သည် မူဆလင် ညီနောင် များ အဖွဲ့နှင့် ထိုအဖွဲ့ ၏ ပင်လယ်ကွေ့ နိုင်ငံ များ အတွင်း လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်မှု များကို ထောက်ခံ အားပေး သည့် နိုင်ငံ အ ဖြစ် ရှုမြင်ခံ ထားရ သည်။ မူဆလင် ညီနောင် များ အဖွဲ့၏ ဆောင်ရွက် မှုများ အား ပင်လယ် ကွေ့ နိုင်ငံ များ တွင် ပိတ်ပင် ထားသည်
အခွန်ပေးဖို့ ကျန်နေသေးသူများ မတ်လ ၃၁ ရက်နောက်ဆုံးထားပြီး အခွန်ကြွေးကျန်ပေးဆောင်ဖို့ သက်ဆိုင်ရာက ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မံ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
အမြတ်ခွန် ၀င်ငွေခွန်နဲ့ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ပေးဆောင်ဖို့ ကျန်ရှိနေသူများထံ နို့တစ်စာတွေ ပေးပို့ထားပြီးဖြစ်လို့ လာရောက်ပေးဆောင်ကြဖို့နဲ့ ပေးဆောင်ဖို့ ပျက်ကွက်ရင် ဥပဒေနဲ့ အရေးယူမယ်လို့ ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အဘယ်ကြောင့် ရာသီဥတုနှင့် ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ပြောင်းပြန်ဆက်စပ်နေတဲ့ အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ရာသီဥတုက အရမ်းပှုနေရင် ဝမ်းထဲမှာ အေးနေပါတယ်။
ရာသီဥတုက အရမ်းအေးနေတဲ့ အခါမှာတော့ ဝမ်းထဲမှာ ပှုနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆောင်းရာသီတွင် ဝမ်းထဲမှာ ပှုတဲ့ အတွက် အငွေ့များ ထွက်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခုလိုနွေရာသီမှာ အပြင်နေပှုထဲက ပြန်လာချိန် ရေခဲရေသောက်ကြည့် လိုက်ပါ။ လည်ချောင်းနာလာပြီး ချွဲတွေတောင် ကျပ်လာ ပါလိမ့်မယ်။ ဒါထက်ဆိုးတာက
အပှုကန်ပြီး နေမကောင်းတောင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နွေရာသီ ရေခဲရေ သောက်ခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်ပါလို့ သတိပေးလိုက် ရပါတယ်။
လင်မယားအချင်းချင်းရန်ဖြစ်ပြီး နပန်းလုံးသတ်ပုတ်ရာမှဇနီး ဖြစ်သူကလင်ယောက်ျားဖြစ်သူအားလည်ပင်းညှစ်ခဲ့သဖြင့်လင်ယောက်ျား ဖြစ်သူသေဆုံးခဲ့မှု ယခုလ ၁၃ ရက် ည ၈ နာရီတွင် မြိတ်မြို့၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ မြိတ်တောင်ကျေးရွာအုပ်စု အင်းလေးကမ်းရပ်အောင် ဇမ္ဗူ(၄)လမ်းတွင်နေထိုင်သူ မမိုးမိုးအေး (ခ)တင်တင်မိုး(၃၇နှစ်)နှင့် ၄င်း၏ခင်ပွန်းဖြစ်သူ မှတ်ကြီး(ခ)ကျော်နိုင်(၃၄နှစ်) ကျပန်းလုပ်ကိုင် သူတို့သည် စကားများရန်ဖြစ်ကြပြီး နပန်းလုံးသတ်ပုတ်ကြရာ မမိုးမိုးအေး (ခ)တင်တင်မိုးက ခင်ပွန်းဖြစ်သူမှတ်ကြီး(ခ) ကျော်နိုင်၏ လည်ပင်းကိုညှစ်ခဲ့သဖြင့် ကျော်နိုင်မှာသတိမေ့သွားပြီး မြိတ်ဆေးရုံ ကြီးသို့ တင်ပို့ကုသစဉ်ရရှိသောဒဏ်ရာများကြောင့် ည ၉ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်။
အဆိုပါခင်ပွန်းဖြစ်သူအား လည်ပင်းညှစ်၍ ဒဏ်ရာရစေသူမမိုး မိုးအေး(ခ)တင်တင်မိုးအား ဥပဒေအရအရေးယူပေးပါရန် ရာအိမ်မှူး ဦးကျော်မြင့်က တရားလိုပြုလုပ်တိုင်တန်းသဖြင့် မြိတ်မြို့မရဲစခန်းက (ပ) ၁၉၁/၂ဝ၁၄ ၊ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃ဝ၂ ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက် ထားပြီးအမှုစစ်အဖြစ် ဒုရဲအုပ်အောင်မျိုးဝင်းမှ စစ်ဆေးဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။